पूर्णिमाको २५% हकप्रद बिक्रि गर्न जेठ १६ गते बुक क्लोज गर्दै
ARCHIVE, MARKET WATCH » पूर्णिमाको २५% हकप्रद बिक्रि गर्न जेठ १६ गते बुक क्लोज गर्दै
काठमाडौं - पूर्णिमा विकास बैंकले २५% हकप्रद सेयर बिक्री गर्न जेठ १६ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । अब यस बैंकको हकप्रद भर्न जेठ १५ गतेसम्ममा सेयर किनेर सेयरधनी बनिसक्नुपर्नेछ । बैंकले ४ः१ अनुपातमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको ८ लाख ८० हजार ९६२.८२ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
पूर्णिमाको हकप्रदमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्दैछ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तस्रो त्रैमाससम्ममा चुक्ता पुँजी ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यो त्रैमासमा बैंकले ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । पूर्णिमाको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) २८ रुपैयाँ ५२ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३५ रुपैयाँ १६ पैसा छ ।
एचआरमा हस्तक्षेप हुँदा सेञ्चुरी बैंकमा कर्मचारीको लफडा, तलवमा 'मनपरी', नियुक्तिमा 'बलमिच्याईं' !
जनार्दन शर्माले चुनाव जित्ने पक्कापक्की ! मतगणना नसक्दै विपक्षीले दिए बधाई !